क्वार्टरफाइनलमा कस्को भिडन्त को सँग ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
क्वार्टरफाइनलमा कस्को भिडन्त को सँग ?
२० असार २०७५, बुधबार ०४:५४
काठमाडौं । रूसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्र्तगत प्रि–क्वाटरफाईनलका खेलको समाप्तिसँगै अन्तिम ८ मा पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा स्वीडेन र ईङ्ल्याण्डले आ–आफ्ना खेलमा जित हात पार्दै अघिल्ले चरणमा प्रवेश गरेसँगै क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने ८ टोलीको टुंगो लागेको हो । यसअघि उरुग्वे, फ्रान्स, ब्राजिल, बेल्जियम, रसिया र क्रोएसियाले अन्तिम ८ को स्थान सुरक्षित गरिसकेका थिए ।
प्रि–क्वाटरफाईनल अन्तिम खेलमा स्वीट्जरल्याण्डलाई हराउदै स्वीडेनले अन्तिम ८ स्थान सुरक्षित गरेको हो । त्यस्तै, पेनाल्टी सुटआउटमा कोलम्बियालाई स्तब्ध पार्दे इंग्ल्यान्डले पनि आगामी यात्रा तय गरेको हो । कोलम्बिया र ईङ्ल्याण्डको खेल निर्धारित समय बराबरीमा टुंगिएपछि अतिरिक्त समयमा प्रवेश गरेको थियो । जसमा पनि कुनै पक्षले पनि आफ्नो पक्षमा निर्णायक बनाउन नसकेपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी सुटआउटबाट भएको हो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा इंग्ल्यान्ड ४–३ ले विजयी भयो । खेलको ५७औँ मिनेटमा इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेर खेलमा अग्रता लिएका थिए । जुन अग्रता निर्धारित समयसम्म नै रह्यो । तर थपिएको तेस्रो मिनेटमा कोलम्बियाका येरी मिनाले गोल गरेर र खेललाई बराबरीमा ल्याए । जसका कारण खेल थप ३० मिनेटको अतिरिक्त समय र पेनाल्टी सुटआउटसम्म पुग्यो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा इंग्ल्यान्डका गोल किपर जोर्डन पिकफोर्डले कोलम्बियाका खेलाडी कार्लोस बाकाको पेनाल्टी रोकिदिए । जसले खेललाई इंग्ल्यान्डको पक्षमा र्पायो । इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन, मार्कस रसफोर्ड, केइरन ट्रिपियर र एरिक डायरले गोल गरे । कोलम्बियाका एक खेलाडीको पेनाल्टी खम्बामा लागेर बाहिरिएको थियो । कोलम्बियाका तर्फबाट जुआन कुवादराद्रो र लुइस मुरिएलले मात्रै पेनाल्टीमार्फत गोल गर्न सफल भए ।
त्यस्तै यसअघि मंगलबारै सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशाला भएको पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्डलाई १–० गोलले पराजित गर्दै स्विडेनले अन्तिम आठमा स्थान बनाएको हो । दोस्रो हाफको ६६औं मिनेटमा स्विडेनका इमेल फर्सवर्गले गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता बनाएका थिए ।
अबको भिडन्त कस्को को सँग ?
जारी विश्वकपमा सहभागी ३२ टोलीमध्येबाट १६ हुँदै उत्कृष्ट ८ टोली छनोट भइसकेका छन् । क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाउने यी ८ टोलीको भिडन्त आगामी शुक्रबारबाट शुरु हुनेछ ।
शुक्रबार हुने पहिलो खेलमा उरुग्वे र फ्रान्स भिड्दैछन् । फ्रान्सले उपाधिको दाबेदार मानिएको अर्जेन्टिनालाई हराउँदै अन्तिम ८ को स्थान बनाएको हो । त्यस्तै उरुग्वेले अर्को उपाधिको दाबेदार मानिएको पोर्चुगललाई पन्छाउँदै अन्तिम ८ को स्थान पक्का गरेको हो । उरुग्वेको अबको यात्रा भने त्यति सहज छैन ।
सन १९९८ मा विश्वविजेता बनेको फ्रान्स यो विश्वकपमा पनि निकै लयमा देखिएको छ । त्यसो त फ्रान्सका लागि उरुग्वे बाधक नबन्ला भन्न सकिन्न । उरुग्वे पनि दुई पटकको विश्व विजेता टोली हो ।
त्यस्तै शुक्रबार नै हुने अर्को खेलमा बेल्जियमले ब्राजिलको सामना गर्नेछ । ब्राजिल पाँच पटकको विश्व विजेता टोली भए पनि अबको यात्रामा ब्राजिलका लागि बेल्जियम प्रमुख चुनौतका रुपमा देखिन्छ । शनिबार हुने दोस्रो क्वार्टरफाइनलको पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्ड र स्वीडेन भिड्नेछन् ।
प्रि क्वार्टरफाइनलमा कोलम्बियालाई हराउँदै इग्ल्याण्डले अन्तिम ८ को स्थान बनाएको हो भने स्वीडेनले स्वीट्जरल्याण्डलाई हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । शनिबार नै हुने दोस्रो खेलमा आयोजक रसिया र क्रोएसिया आमने सामने हुनेछन् । यो विश्वकपमा आयोजक रसियाले शुरुवाती खेलदेखि नै शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका कारण उपाधिको दाबेदारका रुपमा देखिएको छ ।
उसले प्रिक्वार्टर फाइनलमा बलियो तथा उपाधिको दाबेदारका रुपमा हेरिएको स्पेनलाई हराउँदै अन्तिम ८ को स्थान बनाएको हो । यता क्रोएसियाले भने डेनमार्कलाई हराउँदै आगामी यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ ।